Kenya: Abekho abesifazane abathunjiwe | News24
Kenya: Abekho abesifazane abathunjiwe
Nairobi - Izikhulu zaseKenya ziyiphikile imibiko ethi kunabesifazane abathunjiwe ngesikhathi kuhlaselwa edolobheni iMpeketoni nakwezinye izindawo ezigudle ugu ezweni.
Imibiko ecaphuna izakhamuzi, ithe abahlaseli bathumbe abesifazane abangu-12 ngemuva kokubulala abantu abangaphezu kuka-60 kulezi zidubedube ezenzeke izinsuku zilandelana.
"Abesifazane abazange bahlaselwe, le mibiko ingamanga," kusho inhloko yamaphoyisa eKenya, uDavid Kimaiyo, nohambele leya ndawo.
Esinye isikhulu, esingumsizi kakhomishana wamaphoyisa, uBenson Maisori, uthe uphenyo lutshengisa ukuthi abahlaseli bebeqondene ngqo nabantu besilisa.
"Kuyinto engekho ukuthi kukhona abesifazane abathunjiwe. Okwenzekile ukuthi abahlaseli bebephuma bengena emizini yabantu bethatha ngenkani amadoda," esho.